အိပ်ခန်းပြင်ဆင်ရန်အိပ်ရာစားပွဲ ၆ မျိုး | Bezzia
မာရီယာ vazquez | 30/04/2021 18:00 | အိမ်ထောင်ပရိဘောဂ
ညအိပ်စင်များသည်ပရိဘောဂ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည် ကျနော်တို့အိပ်ခန်းအတွက်မရှိမဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစား။ သူတို့ဟာအိပ်ခန်းရဲ့သိုလှောင်နိုင်စွမ်းကိုတိုးမြှင့်ဖို့မဟာမိတ်တွေဖြစ်ကြပြီးအိပ်ရာဝင်ချိန်မှာကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်တဲ့အရာအားလုံးကိုလက်ထဲမှာကိုင်ထားဖို့မရှိမဖြစ်လိုအပ်တယ်။
သင်မအိပ်ခင်နှင့်နိုးသောအခါမည်သည့်အရာများကိုအသုံးပြုသနည်း။ ညမှောင်ခိုတွင်စုစည်းနိုင်သည့်အရာများအပြင်အခြားမည်သည့်အရာများသင်လိုချင်ပါသနည်း။ သင်၏လက်တွေ့လိုအပ်ချက်များကိုလေ့လာပါ, မည်သည့် nightstand ၏စတိုင်လ်သည်အိပ်ခန်း၏လှပမှုနှင့်အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်ပြီးသင့်လိုအပ်ချက်နှင့်အကိုက်ညီဆုံးကိုရွေးချယ်ပါ။
2 Nordic မှုတ်သွင်း
Floating nightstand များသည်အခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်သည် သေးငယ်တဲ့နေရာများအလှဆင်။ သင်အိပ်ရာတစ်ဖက်တစ်ချက်စီ၌နေရာသိပ်မရှိပါကသို့မဟုတ်အခန်းကျယ်သောပရိဘောဂများဖြင့်အခန်းအားမသွင်းလိုပါကအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်အကြောင်းပြချက်များစွာဖြင့်မဟာမိတ်ဖြစ်လာသည်။
သူတို့ကနည်းနည်းအာကာသတက်ယူပါ။ floating model အများစု၏အရွယ်အစားသည်သင့်အားစံစားပွဲတစ်ခုမပါသည့်နေရာများတွင်နေရာချထားရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်။
ကြမ်းပြင်ကိုအဆင်ပြေစွာသန့်ရှင်းရေးလုပ်နိုင်တယ်။ သူတို့ကိုရွေ့လျားခြင်းမှကာကွယ်ပေးသောနံရံနှင့်ကပ်ထားသည်။ သို့သော်သူတို့သည်မြင့်မားသောကြောင့်အခန်း၏နေ့စဉ်သန့်ရှင်းရေးကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေသည်။
ရေပေါ်သစ်သားစားပွဲများသည်သူတို့အားပူနွေးစေသောကြောင့်ယနေ့အိပ်ခန်းကိုအလှဆင်ရန်လူကြိုက်အများဆုံးဖြစ်သည်။ အတူရှိသူများပေမယ့် အလင်းတန်ချိန်အတွက်ရိုးရှင်းသောဒီဇိုင်းများ: လူဖြူများ၊ လိမ်းဆေးများ၊ မီးခိုးရောင်များ…ခေတ်သစ်ဗေဒနှင့်အတူအိပ်ခန်းများတွင်စင်မြင့်ကို ဦး ဆောင်ပါ။ ၎င်းတို့ကိုသိုလှောင်နိုင်စွမ်းကိုတိုးမြှင့်နိုင်သည့်အံဆွဲတစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုဖြင့်ရှာတွေ့နိုင်ပြီး၎င်းတွင်ဆီမီးခွက်ကိုတပ်ဆင်စရာမလိုပါ။
El nordic စတိုင် ၎င်းသည်ပြီးခဲ့သည့်ဆယ်စုနှစ်အတွင်းအတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်း၏စံနှုန်းတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့သည်။ သဘာဝသစ်သားနှင့်အဖြူရောင်အသေးစိတ်ကိုပေါင်းစပ်ထားခြင်း, ဒီစတိုင်၏စားပွဲကွဲပြားခြားနားသောစတိုင်များ၏အိပ်ခန်းမှအလင်းနှင့်နွေးထွေးမှုကိုဆောင်ခဲ့ရမည်။ ခြေထောက်လေးခုတွင်သူတို့သည်ယေဘုယျအားဖြင့်အိပ်ရာအနီးရှိအခြေခံလိုအပ်ချက်များရှိစေရန်အံဆွဲတစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုရှိသည်။
1. Nunila-Kave မူလစာမျက်နှာ၊ 2. Sklum၊ ၃။ Larsen-Made၊ ၄။ Sklum
Elegance နှင့်ခေတ်မီဆန်းပြားမှုတို့သည်သင်၏အိပ်ခန်း၏ပုံစံကိုသတ်မှတ်ပါသလား။ သို့ဆိုလျှင်ဤ nightstands များသည်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်မည်။ တစ် ဦး ပေါင်းစပ်သောသူတို့ကို ရွှေဒြပ်စင်နှင့်အတူအဖြူရောင်တောက်ပ ၎င်းတို့သည်အိပ်ခန်းအဖြူ၊ အိပ်ခန်းအမြင့်များနှင့်ပြတင်းပေါက်ကြီးများနှင့်အလှဆင်ထားသောအိပ်ခန်းများကိုအလှဆင်ရာတွင်လူကြိုက်အများဆုံးဖြစ်သည်။
Made နှင့် Ikea မှစားပွဲငယ်များသို့သော် ပို၍ ခေတ်မီသောထိတွေ့မှုကြောင့်အိပ်ခန်းအားအိပ်ခန်းအားပေးလိမ့်မည် အနက်ရောင်အရောင်ဒီဇိုင်းများ ဖြောင့်ပုံစံများနှင့်ရိုးရှင်းသောစတိုင်။ အရောင်နဲ့ဝံ့သလား။ Made's ကဲ့သို့ပုံစံများ၊ မျဉ်းကြောင်းများနှင့်မျဉ်းကြောင်းများကိုပေါင်းစပ်ထားသည့်ဒီဇိုင်းများသည်သင်၏အိပ်ခန်းအားဂန္ထဝင်နှင့်ခေတ်သစ်အကြားမျှတမှုကိုပေးလိမ့်မည်။
စက်မှုစတိုင်အိပ်ရာစားပွဲ ယေဘုယျအားဖြင့်သတ္တုကိုယ်ထည်ရှိသည်။ အချို့သည်စက်မှုလုပ်ငန်းများ၊ ဆေးရုံများ၊ တက္ကသိုလ်များတွင်ယခင်ကအသုံးပြုခဲ့သောသတ္တုသော့ခလောက်ဒီဇိုင်းများမှလှုံ့ဆော်ခံရသည်၊ သို့သော်၎င်းတို့သည်အများအားဖြင့်ပိုမိုသောအသွင်သဏ္ဌာန်များနှင့်အရောင်များဖြင့်အဆင့်မြှင့်ထားသည်။
၁။ Savoi-Kave Home၊ 1.Bavi-Sklum၊ Trixie-Kave Home, 2.Nikkeby-Ikea၊ သတ္တုကိုသစ်သားဖြင့်ပေါင်းစပ်ပါ ပူနွေးသောဒီဇိုင်းများအောင်မြင်ရန်အလို့ငှာ။ ဒီပစ္စည်းတွေကသဘာဝနဲ့ကြမ်းတမ်းလေလေပရိဘောဂတွေရဲ့စက်မှုပုံစံပိုတိုးလေလေဖြစ်တယ်။ ပိုတသားတည်းနှင့်ပွတ်ပို, သူတို့ကခေတ်သစ်ဗေဒဖို့နီးကပ်လာ။
သင်၏အိပ်ခန်းကိုစိတ်ကူးယဉ်ဆန်ဆန်ထိတွေ့နိုင်ရန်သင်၏အဘွား၏ထပ်ခိုးမှထွက်လာပြီဟုထင်ရသည့် nightstands များထက်သင့်တော်သောမဟာမိတ်ကိုရှာတွေ့လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ လှည့်သောခြေထောက်များ၊ ကွေးသောလိုင်းများနှင့်အဖြူရောင်မျက်နှာပြင်များပါသောဒီဇိုင်းများသည်ရွေးချယ်စရာအကောင်းဆုံးဖြစ်သည် ပြားသို့မဟုတ် cannage ကွက်။
1. Ikea, 2. Vilmupa, 3. Kave မူလစာမျက်နှာ, 4. Vilmupa
သူတို့ဟာစတုဂံညစဉ်ညနေခင်းများကဲ့သို့တူညီသောထင်ပေါ်ကျော်ကြားမှုမရှိဘူး၊ သူတို့မှာဘယ်တော့မှမရှိတော့ဘူးဆိုတာကိုတော့ငါတို့မယုံဘူး၊ ဒါပေမဲ့သူတို့ဟာလူကြိုက်များတဲ့ရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်တယ်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ထုတ်လုပ်ခဲ့သည် ဖဲတန်ချိန်ထဲမှာယွန်းသစ်သား ဒါမှမဟုတ်တောက်ပနေတဲ့အတွက်သူတို့မှာအလှဆင်နိုင်စွမ်းရှိတယ်။
1.Kurb-Kave နေအိမ်၊ ၂။ Odie-Made၊ ၃ ။ Cairn-Made၊ ၄။ Babel 2-Sklum
အမြင်အာရုံပိုမိုပေါ့ပါးသည် သူတို့ကကျွန်မတို့ကိုအံဆွဲသုံးခုအထိပေးတယ် အရာသိုလှောင်ရန်။ သို့သော်၎င်းသည်စတုရန်းပုံသဏ္ဌာန်ရှိသူများကဲ့သို့လက်တွေ့မကျပါ။ အဘယ်ကြောင့်? ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ၄ င်း၏ပုံသဏ္givenာန်ကိုကြည့်ပြီးသူတို့ပေးတဲ့သိုလှောင်မှုနေရာကိုအသုံးချဖို့ကပိုခက်ခဲလို့ပဲ။
သင်၏အိပ်ခန်းကိုမည်သည့် nightstand အမျိုးအစားရွေးချယ်မည်နည်း။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Bezzia » ဆင်ယင်မွမ်းမံခြင်း » အိမ်ထောင်ပရိဘောဂ » အိပ်ခန်းပြင်ဆင်ရန်ဘေးဘက်စားပွဲ ၆ မျိုး